Kwakakodzera Materials nesefa kugadzirwa kubva kabhoni simbi, aruminiyamu, Stainless simbi, uye anokosha alloys kunopa ngozi, chadzo, hunogara zvinogadzirwa kuti runyararo zvose. Zvazvakanakira, chaicho kushanda uye zvimwe Grating Mesh: Steel nesefa inopa zvinotevera zvazvakanakira kuenzaniswa simbi afoot machira: Steel nesefa ane chiedza uremu, simba rakanaka, hombe kutakura vanokwanisa uye anogona kuponesa zvinhu uye mutengo. Rinopa kufefetedza chiedza uye mhepo, ano pfungwa, aesthetic dzakanaka ...
Min.Order Quantity: 5 tani / matani
Supply Mano: 400 tani / matani por Week
nesefa kugadzirwa kubva kabhoni simbi, aruminiyamu, Stainless simbi, uye anokosha alloys kunopa ngozi, chadzo, hunogara zvinogadzirwa kuti runyararo zvose.
Zvazvakanakira, chaicho kushanda uye zvimwe Grating Mesh:
Steel nesefa inopa zvinotevera zvazvakanakira kuenzaniswa simbi afoot machira:
Steel nesefa ane chiedza uremu, simba rakanaka, hombe kutakura vanokwanisa uye anogona kuponesa zvinhu uye mutengo. Rinopa kufefetedza chiedza uye mhepo, ano pfungwa, aesthetic chitarisiko uye Anti-skid vakachengeteka zvakanaka. Chinhu nyore kuchenesa, nyore kuisa uye hunogara kwenguva tizvishandise.
Nesefa Mesh zvigadzirwa yakagadzirirwa uye kugadzirwa kuti siyana maindasitiri uye vehurumende zvakagadzirwa mu mugwagwa muguta, mapindu, pachivanze, yendege, njanji uye mumaindasitiri engineering, uye vanopa inotevera zvinhu:
* Aesthetic maonero: Simple mitsetse uye sirivha chitarisiko musangano ano muitiro.
* The yakanakisisa abudise: Leakage kunharaunda 83,3 muzana, kupfuura kaviri kukandira simbi zvigadzirwa.
* Hot-Dip kwakakurudzira kurapwa: Good Ngura-chiratidzo pfuma, Nokuraramisa-isina kutsiviwa.
* Anti-kuba design: The pabutiro uye pamatanda riri pamwe chete hinji chipiriso kuchengeteka, kuchengeteka uye akazaruka nyore.
* Mari upfumi: Large-span. Zvishoma akarasika kuti mutoro achienzaniswa kukandira simbi zvigadzirwa. Mutengo angaponeswa kuti mukana chakabiwa kana kupwanya mumwe kana kukandira simbi iri rinoshandiswa.
* High simba: The simba uye kuoma akakwirira zvikuru kupfuura kukandira simbi. Inogona kushandiswa zviteshi, yendege uye zvimwe guru-span inoremerwa vachizvitakudza ezvinhu.
Previous: Barbecue Grill Netting